မင်း ခန့် Blog မှ ကြို့ ဆို ပါတယ်
netcut တဲ့ ကြားဖူးလား သိသူလဲ ရှိမှာပေါ့ မသိသူလဲ ရှိမှာပါ ..
ဘာဘဲပြောပြော လိုချင်ရင်ယူထားလိုက်ဗျာ အဲတာ ဘာအသုံးဝင်လဲဆိုရင် ဆေးထိုးခြင်းပေါ့ ..
အင်တာနက်ဆိုင်မှာသင်ဟာ စက်သုံးနေတယ် ဆိုရင် ကိုယ်နဲမတည့်တဲ့သူကလဲ အဲဆိုင်မှာဘဲသုံးနေရင်
ဆေးလှမ်းထိုးလို့ရတယ် သူလုံးဝ အင်တာနက်လိုင်းပျက်တောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ် . netcut လေး နေ သူ့စက်နံပါတ်လေး ရှာပြီးဖျက်ချလိုက်ရုံပါဘဲ ယုံလား မယုံရင် ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်လေ
အားလုံးကို ဖျက်ချပြိး ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ သုံးလို့ရတယ် ... အရမ်းလွယ်တယ် ကျွန်တော်လင့်ပေးမယ်
အဲလင့်လေးကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ ဒေါင်းလုပ်ကျမယ်အဲတာကို Run လိုက်ပြီးလိုသလိုသုံးတော့နော်
ကျွန်တော်ပြောတာ ရှုပ်များသွားလားမသိဘူး လက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ် ကျွန်တော်စကားအတည်ပြုမည်
ကဲ ဒီမှာ လင့် ယူဗျာ ....
အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ ... လိုကယ်အတွင်းလုပ်ချင်တာလုပ် ... :)
Posted by Minkhantkyaw at 1:30 AM No comments:
အထွေအထူးပြောစရာလို့မယ်မထင်ပါဘူး ဒီကောင်လေးကို ..
ကျွန်တော် ဒီ Blog လေးကို မရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီ ဒီနေ့ စိတ်ကူးပေါက်တာနဲ ရေးဖြစ်တာ အခုနောက်ပိုင်လူငယ်တော်တော်များများက အင်တာနက်သုံးတက်ပြီဆိုတာနဲ ဟက်ကင်းကို စိတ်ဝင်စားလာကျပြီ သူတို့က လွယ်လွယ်လေးနဲ ရတယ်ထင်နေကျတယ်ဗျ ဒါကြောင့် Comment ပိုင်သူတွေအတွက် လွယ်ကူပါတယ်ဆိုတာ ဒီ ကောင်လေးက သက်သေပြလိုက်ပါ့မယ် .. ကဲ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ....
အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါနော် ... Fle Size ကတော့ 2.39 GB ရှိပါတယ်
အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ သားကိုတော့လုပ်နဲနော် ဟဲဟဲ
Yo Yo ကို ဆက်သွယ်ရန် .......
Posted by Minkhantkyaw at 12:51 AM No comments:
ပျမ်းမျှအားဖြင့် အမျိုးသားတွေရဲ့ ဘဝသက်တမ်းက အမျိုးသမီးတွေ ထက် ငါးနှစ်ပိုနည်းလေ့ ရှိပါ တယ်။ အမျိုးသားတွေက စိတ်ဖိစီးမှု အဆင့်မြင့်မားပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုခံယူဖို့ ပိုမိုနှောင့်နှေး တွန့်ဆုတ်တတ် တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ဖြစ်လွယ်ရတာပါ။ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ သင့်တော်တဲ့အစာ၊ အာဟာရနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ အမျိုးသားတွေရဲ့ အာဟာရ လိုအပ်ချက်က အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မတူပါဘူး။
အမျိုးသားတွေက အစာစားတဲ့ အလေ့အထကို မှန်ကန်အောင် ပြောင်းလဲနိုင်ရင် ကျန်းမာရေး သိသိသာသာ ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ် အများအပြားပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်တွေက အူမကြီးကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ စပျစ်သီးခြောက်၊ ပဲပုပ် စေ့၊ မုန်လာဥနီနဲ့ စွန်ပလွံသီးတွေမှာ မဂ္ဂနီဆီယမ် အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။
အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ တစ်နေ့မှာ သစ်သီးနဲ့ဟင်း သီးဟင်းရွက် ငါးကြိမ် စားသင့်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ဟာ အမျိုးသားတွေအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါပြီး တစ်နေ့တာ အစားအစာထဲမှာ အမျှင်ဓာတ် ၂၅ ဂရမ် ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက် နှံစာ၊ ပဲပုပ်စေ့၊ ဂရိတ်ဖရုသီးတွေမှာ အမျှင်ဓာတ် များများ ပါဝင်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးက နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်း မွန်စေရုံသာမက သွေးကြောအိုမင်းမှု၊ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်တာ၊ မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှု၊ ပန်းသေတာနဲ့ အရေးကြောင်းထင်တာတို့ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ပါဝင်တဲ့ လိုင်ကိုပင်းဓာတ်ဟာ ကင် ဆာကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ခရမ်းချဉ် သီးကို ဟင်းချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ လိုင်ကိုပင်းပမာဏ ပိုမိုတိုးမြင့်လာပါတယ်။
ဖောလိတ်ဓာတ်က ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ အရာပါ။ လိမ္မော်ရည်၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်နဲ့ တခြား အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲမှာ ဖောလိတ် ဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဖောလိတ်ဓာတ်က သွေးကြော ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပြီး သွေးဖိအားကို မှန်ကန်စေပါတယ်။
အိုမီဂါ ၃ အဆီ
အိုမီဂါ ၃ အဆီပါဝင်တဲ့ အခွံမာသီးတွေက နှလုံးကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ သီဟိုဠ်စေ့၊ ဗာဒံစေ့ စတဲ့ အခွံမာအစေ့အဆန်တွေမှာ အိုမီဂါ ၃ အဆီပါ ဝင်ပါတယ်။ တီလာပီးယား၊ ဆယ်လ်မွန်ငါးစတဲ့ ငါးတွေက စားသင့်တဲ့ ငါးတွေပါ။ အမျိုးသားတွေ အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့ရာအတွက် တစ် ပတ်မှာ သုံးကြိမ်ခန့် ငါးစားပေးသင့်ပါတယ်။
အူမကြီးရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကောင်းမွန်ဖို့ အတွက် ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ လိုပါတယ်။ ရေဓာတ်ပြည့် ဝတာက အရေးကြောင်းတွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။
စပျစ်ဝိုင်မှာပါတဲ့ ရက်စ်ဗာထရောဟာ အင်တီ အောက်ဆီးဒင့် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် အသားအရေ ကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ ကဖင်းဓာတ် ကော်ဖီကို အသင့်အတင့်သောက်တာက သင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပါတယ်။ ဒါက အသည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပြီး အယ်လ်ဇိုင်းမား နဲ့ပါကင်ဆန်ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေလို့ပါ။
ဗီတာမင်ဒီက ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီရရှိအောင် နေခြည်နုနုခံ ယူပါ။ နေခြည်နုနု မရရှိတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ နွားနို့ ဒါမှမဟုတ် လိမ္မော်ရည်သောက်ပါ။
Posted by Minkhantkyaw at 8:56 PM No comments:
သိပ်မကြာခင်အပတ်က ဝေါလ်စထရီဂျာနယ်မှာ FacebookApplication တွေနဲ့ပတ်သက် လို့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးရဲ့အဆိုအရတော့ Facebook ရဲ့ third-party developer တွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ App တွေကတစ်ဆင့် user တွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဒေတာတွေကိုတရား မ၀င်ရ ယူသုံးစွဲနေကြတယ်လို့ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ အဲဒါဟာအမှန်ဆိုရင်တော့ facebook ဟာ user တွေ ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှု privacy ကိုချိုးဖောက်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတကယ်ရောဟုတ်ပါ့မလား။ ဒါ့ကြောင့် နည်းပညာလောကရဲ့ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေနဲ့ မေးမြန်းပြီး၊ Facebook ရဲ့အကြောင်း ၎င်းရဲ့ Application တွေအကြောင်း၊ User တို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှုအပိုင်းတွေကိုပါ အများသိရှိရအောင် အမေးအဖြေပုံစံနဲ့ ပြန်လည်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
A - အများစုက အဲသလိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါက သင်က သူတို့ကိုခွင့်ပြုချက် permission ပေး မှလုပ်နိုင်ကြတာပါ။ Connect with Facebook ဆိုတဲ့ခလုတ်ကို သင်က ကလစ်ခေါက်မယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်လို information တွေကို သင်ရဲ့စာမျက်နှာကနေ လွှဲပေးနေတယ်ဆိုတာမသိရင်တော့ အဲဒီလိုရ ယူသွားစေနိုင်မှာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့်သင်က ကိုယ့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဘယ်သူက access လုပ်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားစဉ်းစားမှာပါ။
A - ဝေါလ်စထရီဂျာနယ်ကတော့ သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စကို “ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ ချိုးဖောက်ခံရမှု (Facebook privacy breach)” လို့ခေါ်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကို အဲဒီလိုကြီး ခေါင်းစဉ် တပ်လို့တော့မရပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ Facebook မှာအဲဒီလိုဖောက်ခံရတာ ပေါက်ကြားသွားနိုင်တဲ့ ယိုပေါက်ရှိတာမျိုး တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။ “ချိုးဖောက်ခံရတယ်” လို့ပြောတာဟာ အမှန်ကတော့ user တစ်ချို့ ရဲ့ Information တွေဟာ Facebook နဲ့ချိတ်ဆက် sync up လုပ်ထားတဲ့ third-party application တွေဆီ လွှဲပြောင်းရောက်သွားလို့ပါ။ အဲဒီထဲမှာ user ID နံပါတ်တွေ (အဲဒါက User တစ်ဦးစီရဲ့ profile ကိုရှာလို့ရတယ်လေ)။ ပြီးတော့ အဲဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ Public information တွေစသဖြင့် အဖွဲ့ဝင် member တွေရဲ့အများ Public ရှေ့တင်ထားတဲ့ information တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာနယ်ရဲ့ဆောင်းပါးမှာပါတာကတော့ app developer တွေဟာ အဲဒီ user ID နံပါတ်တွေကို တခြားကုမ္ပဏီတွေဆီလွှဲပြောင်းပေးတာ၊ ရောင်းချလိုက်တာတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပြင်ပကုမ္ပဏီတွေဆိုတာက ဒေတာစုဆောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ database တွေမှာ Facebook Profile data တွေကို သူတို့အလွယ်လုပ်နိုင်ဖို့ စုဆောင်းကြတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးက တကယ့်ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Facebook ဟာယခင်ကတည်းက ၎င်းရဲ့ user ID နံပါတ်တွေကို တလွဲသုံးလို့မရအောင် ကာကွယ်ထားပြီးသားပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ချိုးဖောက်ခံရတာမျိုးဖြစ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ Facebook developer blog တစ်ခုမှာလည်း “ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပေါ်လစီကတော့ user data တွေကို ကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတာ အလွန်ရှင်းလင်းပါတယ်။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ user information တွေကိုသဘောတူညီချက်မရဘဲ access လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ဒီလို user တွေ ရဲ့အခွင့်အရေး၊ လုံခြုံမှုကိုချိုးဖောက်တဲ့ application မှန်သမျှကိုလည်း ဖြတ်တောက်တာ၊ ပိတ်ပစ်တာမျိုးပဲလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အခိုင်အမာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးသားပါ” လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
A - အဲဒါကိုဖြေရရင်တော့ Farm-Ville ဂိမ်းနဲ့နမူနာပေးရမယ်။ အမှန်ပြောရရင်တော့ Facebook app အများစုဟာ FarmVille နဲ့ သင်ပတ်သက်သမျှထဲက သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကို FarmVille ကသိတာ ထက်တောင် အများကြီးပါသိနိုင်သလို၊ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်တချို့ကိုလည်း လွှဲပြောင်းရောင်း စားကောင်း ရောင်းစားနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့သင်ဟာ ယနေ့ခေတ်မော်ဒန်စားသုံးသူ စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်မှာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ပါဝင်နေတာကိုတွက်မိရင်ဒီလောက် ကိုယ်ရေးအချက်တွေဖြစ်တဲ့ နာမည်တို့၊ အသက်တို့၊ လူမျိုး၊ အသားအ ရောင်စတဲ့အချက်အလက် တွေကိုသူများက သိသွားတာမအံ့သြပါနဲ့။ ခရက်ဒစ်ကုမ္ပဏီတွေ၊ အွန်လိုင်း retailer program တွေ၊ အွန်လိုင်း ခရီးသွားဘွတ်ကင်ဆိုက်တွေမှာ သင်ဟာကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေ ဖြည့်နေရ၊ Share လုပ်နေရတာမဟုတ်လား။ Facebook app တွေက သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေ ရထားတယ်ဆိုတာ အနည်းငယ်ပါ။ အွန်လိုင်းဥပဒေဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ Fox Rothschild ကကျွမ်းကျင်သူ စကော့တ်ဗားနစ်စ် ကတော့ ဒီလိုပြောထားပါတယ်။
“ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ဟာအလိုရှိလာရင် အင်တာနက်ပေါ်တက်ပြီး ဟိုတယ်ဆိုက်တွေ၊ ရောင်းဝယ်ရေး ဆိုက်တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့နာမည်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ နေရပ် စသဖြင့် အချက်အလက် information တွေဖြည့်နေရတာပဲမဟုတ်လား။ ဒါတွေကိုသင်က ဂရုတစိုက်နဲ့ဖြည့်ထားမယ်။ ပြီးတော့ လုံခြုံစွာပြန်ထွက် log out လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူကသင့် information တွေကို ယူပြီးရောင်းစား တာ၊ ကြော်ငြာတာတွေလုပ်လို့ရမှာလဲ” လို့သူကပြောပါတယ်။ သင်ဟာ FarmVille မှာ Profile ကိုဖြည့်ရ ရင် သူပေးထားတဲ့အတိုင်း အပြည့်အ၀အတိအကျလိုက်နာပြီး ဖြည့်စရာမှမလိုတာ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်လုံခြုံရေး ကို သိပ်ပြီးစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။
Posted by Minkhantkyaw at 9:51 PM No comments:
သူငယ်ချင်းတို့ စိတ်ကြိုက်ပေါက်ကွဲ ဖို့
Grand reef casino bonus code, Trading forex, EURO PALACE, Hit counters, 888 PACIFIC POKER
နည်းပညာ (12) Hackingtool (9) ကဗျာများ (6) ကွန်ပျုတာဆော့ဝဲများ (4) အချစ် (3) ထွေရာလေးပါး.... (3) ကျန်းမာရေး (1) စာအုပ်များ (1) ဓာတ်ပုံများ (1)
" သွား " များ ဖြူဝင်းစေရန် နည်းလမ်းကောင်း အခုတင်မယ့် သွားများ ဖြူဝင်းစေတဲ့ နည်းလမ်းကို တစ်ချို့ သူငယ်ချင်းများလည်း သိ...
Facebook အကောင့် ခိုးခြင်း အကယ်၍ အကောင့်ခိုးလို့မအောင်မြင်ရင်တောင် ယင်းအကောင့် ကြိမ်းသေ Lock ကျမယ့် နည်းပါ အင်မတန် ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ...
အကြည်တော် - စွယ်စုံလက်ဆောင် အကြည်တော်- လှအိုးကွဲ အကြည်တော် - သံသရာရထား အကြည်တော် - ယ္ခောမနဲ့တစ်ထောင့်တစ်ည အကြည်တော် -ကျွန်တော...
Gmail အကောင့်ကို Gtalk အတုနဲ့ ဟက်မယ်
အရင်ဆုံး.. Download လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ Rar file password ခံထားပါတယ် minkhant ပါ. အသုံးပြုနည်းကလွယ်ပါတယ်.။ ဒီ Fol...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ အတွင်း ဗြိတိသျှတော်ဝင်လေတပ်မှ အရာရှိ Squadron Leader Joseph Heaven နှင့် မုံရွာမြို့အနီး ကျေးရွာတရွာမှ မြန်မာကလေးငယ်တဦး ...
သူငယ်ချင်းတို့ လက်တော့လေး အခိုးမခံရအောင် ကာကွယ် ပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလေး ပေးချင်တယ် ဒါလေးက တော့ လက်တော့ကို အားသွင်းထား တဲ ကြိုး တက်ထားရင်ဘဲ ဖြစ...
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Facebook ရဲ့ Timeline Cover ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးအလှဆင်ကြည့်နော်
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Facebook ရဲ့ Timeline Cover ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးအလှဆင်ကြည့်နော် ထက်ထက်ကတော့ အသဲပုံလေးနဲ့အလှဆင်ထားတယ် သဘောကျတယ်ဆိုရင် ...
gtalk မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ချက်ကြရအောင်
* G-Talk နှင့် စာရိုက် ဆက်သွယ်ရာတွင် Smiley လေး ထည့်သုံးချင်ရင် "Shift" သုံးပြီး " : " အရင်နှိပ်ပါ။ ထို.နောက် အောက...
ရတနာသုံးပါးအလေးမထား ပေါ့ပျက်ပျက်နေတက်သောမိန်းမ အင်္ကျီလယ်ဟိုက်sexyကြိုက် ယောက်ျားများရှေ့ ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်တက်သောမိန်းမ ဘောင်းဘီချက...
ကိုယ့် password လေးလုံခြုံရဲ့လား........စစ်ကြည့်ရအောင်
ဒီ၁ခါ ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာက သူငယ်ချင်းတို့တွေ ခုတလောဖြစ်နေတဲ့ password တွေ hack ခံနေရတယ်လို့ ကြားလို့ မိမိ password တွေ Heck မခံရအောင်...